कोरिया–जापान व्यापार संकट, दुबै देशबीच आरोप–प्रत्यारोप Bizshala -
सियोल । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जाए–इनले जापानले आफ्नो मुलुकलाई दिइआएको मित्र व्यापारिक साझेदारीको दर्जा हटाउने जापान सरकारको निर्णयप्रति शुक्रबार भत्र्सना गर्नुभएको छ । उहाँले जापान सरकारको कदम निकै असंवेदनीय रहेको बताउँदै कोरियाले जापानी कदमको प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति मूनले भन्नुभयो, “टोकियोको कदम स्वार्थप्रेरित, ध्वंसात्मक कार्य रहेकाले त्यसले विश्वकै आपूर्ति प्रणालीलाई कमजोर बनाउनेछ, र यसबाट विश्व अर्थव्यवस्थामा त्रासको वातावरण सिर्जना हुनेछ ।”
राष्ट्रपति मूनले व्यापारका क्षेत्रमा उत्पन्न बढ्दो तनाव र संकटको अवस्था अन्त्य गर्न जापानले जतिसक्दो चाँडो आफ्ना निर्णय सच्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जापान र कोरियाबीचको व्यापारका क्षेत्रमा उत्पन्न तनाव सुल्झाउन वार्तामार्फत् सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जापान र दक्षिण कोरिया दुबै लोकतान्त्रिक र अमेरिकी गठबन्धनका मुलुक रहेपनि दुबैबीच पारम्परिक शत्रुता र भूगोलका विषयलाई लिएर द्वन्द्व छ । कोरियाली राष्ट्रपति मूनले जापानसँगको व्यापारमा जापानका सरोकारलाई ध्यान दिन आफूहरु तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
गत वर्ष कोरियाले जापानसँग करिब ८५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार गरेको थियो । जापान सरकारले शुक्रबार दक्षिण कोरियालाई दिएआएको विशिष्ट निर्यातक मुलुकको दर्जा हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
जापानले कोरियासँग पुरानो शत्रुताका आधारमा नभई पछिल्लो कदम राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय मात्र रहेको स्पष्ट गरेको छ । अमेरिकाले दुबै मुलुकलाई शान्त रहन आग्रह गरेपनि यही विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ ।
जापानको पछिल्लो कदम कार्यान्वयनमा आएमा आगामी अगष्ट २८ देखि संवेदनशील वस्तुको सूचीका सयौं वस्तुको निर्यातमा कडाई गरिनेछ । विज्ञहरुले जापानको यो कदम अर्थतन्त्र भन्दा अन्य कारणबाट बढी संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।
नोमुरा सेक्युरिटीजका वरिष्ट अर्थशास्त्री हाजिमे योशिमोतोले जापानको यस कदमबाट दक्षिण कोरियाली अर्थतन्त्रमा सीमित असर पार्ने बताउनुभयो । जापानी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो प्रमुख जापानी निर्यातकहरुले पहिल्यैदेखि विशेष अनुमति लिइसकेका छन् ।
जापानले गत महिना दक्षिण कोरिया निकासी हुने मुख्यरुपमा तीन किसिमका सामानको निर्यातमा कडाई गर्न थालेको थियो । यी सामानहरुमा दक्षिण कोरियाली चिप तथा स्मार्टफोन उद्योगसँग सम्बन्धित रहेका थिए । - रासस/एएफपी
विश्वका सर्वाधिक धनी १ प्रतिशतले अतिगरिबको भन्दा ५० गुणा बढी
ककाठमाण्डौ । विश्वका सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत मानिसले गर्ने कार्बन...
मात्र तीन महिनामा एसबीआईसहितका बैंकबाट १९९६४ करोड भारु ठगी
काठमाण्डौ । कोरोनाकालमा भारतको सार्वजनिक क्षेत्रको बैंकमा...
कोरोना पोजिटिभ वा कन्ट्याक्टमा गएकाहरु आइसोलेट नभए रु. १६ लाख
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई बचाउन ब्रिटेनले निकै...
टिकटकको अमेरिकी कारोबार खरिदमा ओरेकल र वालमार्टबीचको
काठमाण्डौ । अमेरिकी टिकटक प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड...
कोरोना संक्रमित निको हुने दरमा भारत विश्वमै अगाडि, ८०% रेटसहित
काठमाण्डौ । हाम्रो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमित...
लकडाउनकै कारण मालामाल बने धनाढ्य, कसको सम्पत्ति कति बढ्यो ?
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीले ग्रस्त पारेको बितेको ६ महिनाको अवधिमा...
अर्काे वर्षको शुरुमा भारतमा कोरोनाविरुद्धको खोप आउँछ: भारतीय
भारतीय स्वास्थ्यमन्त्री हर्षवर्धनले आगामी महिनाको शुरुतिर...
तेलयुग समाप्त हुँदै, सौर्य र वायु ऊर्जामा लगानी बढ्दै
काठमाण्डौ । बितेका शताब्दीमा विश्व अर्थतन्त्रमा तेल एउटा बलियो...